Ny fiavian’ny zanak’olona (Dan. 7:13)
Vakio izay voalaza momba ny Zanak'olona ao amin'ny Dan. 7:13. Iza ilay Zanak'olona eto, ary ahoana no ahafantaranao Azy (Vakio koa ny Mar. 13:26; Mat. 8:20; Mat. 9:6; Lio. 9:26; ary Lio. 12:8.)
Raha manomboka ny fitsaran'Andriamanitra, dia miditra ao amin'ny efitrano fitsarana ny Olona tena manan-danja indrindra: ny Zanak'olona. Iza Izy io?
Voalohany, olona avy any an-danitra ilay Zanak'olona. Araka izay asehon'ny anarany anefa, dia maneho toetran'olombelona koa Izy. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe: sady Andriamanitra Izy no olombelona, ary tonga mba handray anjara mavitrika eo amin'ny fitsarana.
Faharoa, tonga miaraka amin'ny rahon'ny lanitra ilay Zanak'olona. Sary mahazatra anehoana ny fiavian'i Kristy fanindroany ao amin'ny TV io rahona io. Hita mazava tsara ao amin'ny Dan. 7:13 anefa fa tsy avy any an-danitra ka midina eto an-tany ilay Zanak'olona. Tsy izany, fa mifindra avy amin'ny toerana fray any an-danitra mankamin'ny toerana iray hafa any an-danitra ihany Izy mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra Ray.
Fahatelo, asehon'io fiavian'ny Zanak'olona amin'ny rahon'ny lanitra io fa hahita Azy ny firenena rehetra rehefa hiverina indray Izy. Mampahatsiahy antsika ny amin'ny mpisoronabe tamin'ny andron'ny TT koa anefa io rahon'ny lanitra io. Niditra tao amin'ny efitra masina indrindra izy amin'ny fiafaran'ny taona (andro fanavotana) mba hanadio ny fitoerana masina ho afaka amin'ny fahotana rehetra, ary voahodidin'ny setroky ny ditin-kazo manitra izy tamin'izany.
Mpanjaka koa ilay Zanak'olona. "Nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana Izy, mba hanompoanhy fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra Azy" - Dan. 7:14. Ny matoanteny hoe "manompo" dia azo hadika koa hoe "miankohoka". Hitantsika intsivy io voambolana io ao amin'ny Dan. 1--7 (Dan. 3:12,14,17,18,28; Dan. 6:16,20; Dan. 7:14,27). Midika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Izany no antony tena maharatsy ilay tandroka kely, izay fahefana ara-pivavahana mitarika ny olona hiankohoka amin'Andriamanitra amin'ny fomba diso. Asehon'ny fitsarana faritana eto fa ahitsin'Andriamanitra io fiankohofana diso io. Mametraka olombelona ho mpanelanelana eo amin'Andriamanitra sy ny olona tokoa mantsy io fahefana ara-pivavahana io. Ahariharin'i Daniela eto anefa fa ny Zanak'olona ihany no Mpanelanelana tokana afaka misolo tena ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka maka ny toerany. Milaza tokoa ny Baiboly hoe: "Fa iray no Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesôsy, Izay olona" - 1 Tim. 2:5.